Las Vegas, Macau, fizahantany Monaco raha ampitahaina amin'ny Hawaii sy Seychelles?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Macau » Las Vegas, Macau, fizahantany Monaco raha ampitahaina amin'ny Hawaii sy Seychelles?
Ity fifanakalozan-kevitra ity dia mitranga mandritra ny fotoanan'ny krizy, ny fitiavam-bola na rehefa mitady vahaolana ivoahana. Any Hawaii dia voarara ny filokana ary ho an'ny dcades, ny mpanao politika sy ny olom-pirenena dia tsy te hanana filokana ao Aloha State, ary nivadika an'i Las Vegas ho toerana fialantsasatra ankafizin'ny Hawaii.
Ny filokana dia mety ho tsara, ary koa mpanakalo lalao ho an'ny toerana alefanao. Seychelles amin'ny maha firenena mahaleo tena, mazava ho azy, dia manana tombony amin'ny fifehezana indostria toy izany ary hahazoana antoka fa ampahany tsara amin'ny tombom-barotra hijanona ao amin'ny firenena. Azo antoka fa ny lobbyista avy amin'ny filokana lehibe dia maniry ny hahita filokana atolotra any amin'ny nosy vahiny any amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Ny minisitry ny fizahan-tany Seychelles teo aloha Alain St.Ange, izay consultant fizahantany izao dia mahita fotoana ho an'ny fireneny ary nanoratra tao amin'ny tatitra isan-kerinandro nataony:
“Tsy manana fidiram-bola goavambe i Seychelles amin'izao fotoana izao izay azon'ireo trano filoham-pirenena efa napetraka manerantany. Ireo trano filokana ireo dia mety hitahiry mpiloka manankarena mankeny amoron-tsika amin'ny alàlan'ny fanomezana sidina, fitaterana, toeram-ponenana ao amin'ny trano fandraisam-bahiny manerantany, ary fialamboly toy ny fitsangantsanganana sambo sy ny fitsidihan'ny nosy. Ankoatr'izay, ireto rollers avo ireto dia handany vola be amin'ny fiantsenana sy fisakafoanana mandritra ny fijanonany, ary manampy tombony ara-toekarena kokoa. Ary koa, hoy ny fitenenana hoe 'ny tombo-kase dia manohana ny casino hatrany'. Tsy hanakivy ny filokana, fa ny antontan'isa dia mampiseho fa misy vintana lehibe kokoa hijanonana amin'ny trano ny vola fa tsy handao ny trano. Amin'ny maha-Seychelles 'ny trano' amin'ity tranga ity dia miorina ny tombony ara-toekarena fanampiny.
“Ireo firenena toa an'i Macau sy Monaco dia fantatra amin'ny trano filokana mananjanaka, ary saika ara-toekarena natsangana tamin'ny alalàn'ny filalaovan'ireo mpiloka avo lenta, fantatra ihany koa amin'ny hoe mpilalao junket. Ny mpilalao Junket dia nipoitra tany Etazonia taona maro lasa izay tamin'ny tetika hananganana ny tanàna malaza any Las Vegas ankehitriny. Ireo mpandraharaha Casino any Las Vegas dia hanakarama 'junketeers' hameno fiaramanidina mpiloka mahay. Ireo mpilalao ireo dia horaisina amin'ny saran-dàlana maimaim-poana, trano fandraisam-bahiny, fisakafoanana ary fampisehoana maimaim-poana ho takalon'ny fanolorantenan'izy ireo hiloka ora maromaro isan'andro isan'andro amin'ny haben'ny filokana mazava. Nihevitra ireo casino fa ho resy ireo mpilalao noho izay nampanjariam-bola hitondrana azy ireo eo ambony latabatra, ary amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia marina izy ireo. Na ho ela na ho haingana, ny foto-kevitry ny junket mpilalao dia lasa orinasa manerantany.
“Naneho ireo mpilalao ireo fa tian'izy ireo hoentina any Seychelles miloka ary miaraka amin'izay koa mba hankafizany ny fahafinaretana tropikaly hafahafa ao amin'ny firenentsika, fitambarana tsy dia hitany any an-kafa. Mampalahelo fa ny lalàna ankehitriny dia mandrara ny filokana an-toerana tsy hanasa azy ireo. ”
Mazava ho azy fa misy ny ahiahy azo tsapain-tanana momba ny mety hisian'ny famotsiam-bola amin'ireo mpilalao junket sy ny tsy fifehezana raha toa ka any ivelan'i Seychelles no misy ny fifanakalozana ara-bola. Amin'ity toe-javatra ity dia zava-dehibe ny manamarika fa raha entina any Seychelles ireo mpilalao ireo dia mila mifehy ny fifanakalozam-bola rehetra ho an'ny junket ny tompon'andraikitra ary izany fifanakalozana izany dia amin'ny casino ihany no miorina ao Seychelles. Ny fametrahana lalàna momba ny junkets sy ny fifehezana azy dia mila apetraka mialoha ihany koa.
Ny indostrian'ny fizahantany Seychelles dia tsy mahita fotoana lehibe ahafahana mitondra ireo mpilalao avo lenta eto amintsika ireo. Izahay dia efa nametraka ireo fotodrafitrasa tena tsara miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny izay hahatsapan'ireo mpilalao ireo azy ao an-trano.
Miarahaba ireo mpizahatany amerikanina i Iran ary manome visa
Ny fijinjana ahidrano dia manampy amin'ny fizahan-tany ary mahazo vola any Seychelles